Yusuf Garaad: Aniga iyo Beatrix - Shalay iyo Maanta
1987 waxaan safar baabuur ah uga baxay Muqdisho. Waxaan ku tegey Borama.
Waxaan ku sii hoyday Beled Weyne, Gaalkacyo, Berbera oo bandow ay saaran tahay. Ka dib waxaan tegey Hargeysa oo aan uga gudbay Borame aniga oo ku soo hakaday Gebileey oo uu roob lixaad lihi ka da'ayay iyo Gurayo-Cawl. Howsha aan waday awgeed magaalo kasta oo aan sii maray sida saacado ayaan ka shaqeynayay qaarkoodna maalin gelinkeed.
Soo laabadkii waxaan ku hoyday Sheekh iyo Garowe ka dibna waxaan aaday Boosaaso. Waxaan ku hakannay Qardho oo gabar walaalkeed uu ku xiran yahay Ethiopia aan farriin u geynay midna aan ka soo qaadnay. Waddada Garowe iyo Boosaaso markaas ayaa la dhisayay. Gabadhaas oo sannadkan aan la xiriiray aniga oo walaalkeed raadinaya waxaan ka war helay in uu geeriyooday. AUN.
Muqdisho markii aan ku soo laabtay waxaan u baxay safar kale. Waxaan aaday Luuq aniga oo ku sii hoyday Buur Hakaba iyo Baydhaba. Markii aan laba habeen joogay xerada Qaxootiga Halbo ee Luuq, waxaan aaday Garbaahaarreey, Buurdhuubo iyo Qansax Dheere si aan Baydhaba ugu hoydo inta aanan Muqdisho ku laaban.
Buurta Sheekh 1987
Intaas waxaan wada soconnay Beatrix Attinger oo labadeenna uu midba mar waday gaariga Land Cruiser-ka ah ee aan ku soconnay. Waxaan labadeennuba u shaqeynay Laanqeyrta Cas ee Caalamiga ah ICRC. Howsha aan wadnay waxay ahayd sidii aan Maxaabbiista ay dagaalka ku qabsatay Ethiopia ee dalkeeda ku xirnaa 10 sano aan ehelkooda oo mooda in ay dhinteen oo ka samray ugu sheegi lahayn in ay nool yihiin oo ay xabsi ku jiraan.
Berigaas ayaa Beatrix isugu keen dambeysay. Xalay ayaan isku aragnay New York oo ay safar ku joogto iyada oo ka timid Afrika. Waan wada casheynay oo sawirrada carruurteenna aan is tusnay. Sida laba Soomaali ah oo qurbo iska helay horena isu yaqaannay ayaan marba magaalo ka sheekeysannay.
Waxaan u sheegay in aan jeclaan lahaa in aan Soomaaliya ku martiqaado si aan isla waddadii ugu safarno oo magaalooyinkii oo dhan aan dib u booqanno aragnana isbeddelka ku dhacay laakiin hadda aanuu suurta-gal ahayn safar kii la mid ah.
Labada Sawir mid waa xalay waa New York. Beatrix waxay hadda u shaqeysaa UN. Midka kale waa 1987 sawir aan uga qaaday buurta Sheekh dusheeda inta aynaan ka hooban oo aynaan qado u fariisan Huddus ama Huddisa.
Posted by Yusuf Garaad at 13:32:00